Raiisal Wasaaraha cusub oo taageero weydiistay Baarlamaanka Federalka Somaliya - iftineducation.com
iftineducation.com – Dr. Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Somaliya, ayaa waxa uu taageero weydiistay Baarlamaanka Somaliya, si uu u dhaqaajiyo hawlaha horyaala Xukuumadiisaan cusub.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa muddo bil gudaheed ah waxaa laga doonayaa in Ra’iisal Wasaaraha uu horgeeyo Xildhibaanada Baarlamaanka, si codka kalsoonida uu ugu weydiiyo.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa markaasi ka dib guda geli doono dhismaha Golaha Wasiirada ee Xukuumadiisaan cusub, waxaana sidoo kale uu horgayn doonaa Baarlamaanka, si kalsoonida uu ugu weydiiyo.
Waxa uu balanqaaday in dhismaha Golaha Wasiirada uu kala tashan doono Madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamaanka, Ku Xigeenadiisa, Xildhibaanada iyo dhinacyada kale ee Somalida, si Xukuumadu ay u noqoto mid loo dhan yahay, sida uu yiri.
Dr. Cumar C/rashiid, ayaa muujiyay in kalsoonida Baarlamaanka ay Xukuumadiisa uga dhigan tahay mid muhiim ah, sababo ku aadan Xukuumada oo waqtiga uu ku yar yahay.
Ra’iisal Wasaare Sharmaarke, ayaa munaasabadii galabta lagu soo magacaabay ka sheegay in shaqada uu ka sii wadi doonto, halkii ay kaga tagtey Xukuumadii C/weli Sheekh Axmed Maxamed.